स्तनका मुन्टा नाप्ने प्रतियोगिता | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← तीजअघिकै बुरुकबुरुकः संस्कृति कि विकृति ?
दिनभर यौन उत्तेजना, सयचोटी चरम आनन्द →
यो दुनियामा प्रतियोगिता पनि कस्ता कस्ता ? सुन्दरी प्रतियोगिता त हुनेगरेको हामीले सुने देखेकै हो । तर हुँदाहुँदा सुन्दरीहरुबीच कस्का स्तनका मुन्टा बढी राम्रा भन्ने प्रतियोगिता हुन थालेको छ । चीनमा हालै भएको एक सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी हुनेहरुलाई स्तनका मुन्टाको नाप लिएर मात्र सहभागी गराउने नियम तोकिएपछि त्यसले विवाद र चर्चा एकसाथ सिर्जना गरेको छ । प्रतियोगिताका आयोजकहरुले सहभागी कलेजका छात्राहरुको लागि यस्तो मापदण्ड तोकिदिएका छन् की दुइवटा स्तनका मुन्टाबीचको दुरी २० सेन्टिमिटर भन्दा कम भएका तरुनीहरुले मात्र सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँछन् ।
हुबेइ प्रान्तमा आयोजित कलेज सुन्दरी प्रतियोगितामा यस्तो नियम बनाइएको हो । स्थानीय बासिन्दाहरु आयोजकको यस्तो नियम तथा सोही नियमलाई मानेर सहभागी हुने तरुनीहरुप्रति आक्रोसित बनेका छन् । क्याम्पस मोडेल नामको वेबसाइट मार्फत प्रतियोगिताको ’boutमा जानकारी गराउँदै आयोजकहरुले प्रतियोगीहरुका लागि नितम्ब, कम्मर तथा छातिको आकारका विषयमा पनि कडा मापदण्ड तोकिएको छ ।
आयोजकहरुले भने आफ्ना नियमप्रति भएको आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै साँच्ची नै सुन्दरी छात्राको खोजी गर्न आफुहरुले त्यस्ता नियम बनाएको बताएका छन् । आफुहरुले चिनिया परम्परागत तथा पश्चिमा आधुनिक संस्कारलाई मिश्रण गरेर यस्ता नियम बनाएको दाबी उनीहरुको छ ।